Cloud Computing: Fampiharana sy lozisialy Open Source ankehitriny Avy amin'ny Linux
Cloud Computing: Fampiharana sy sehatra misokatra ankehitriny
Linux Post Install | 24/09/2021 06:00 | About us, Tambajotra / seriver
Indraindray isika dia mitrandraka amin'ny lalina a Sehatra IT Mifantoka amin'ny fomba fijery ny Rindrambaiko maimaim-poana, loharano misokatra ary GNU / Linux. Ny farany dia momba ny Artificial Intelligence amin'ny famoahana antsoina hoe: "Intelligence artifisialy: AI loharano misokatra be mpahalala sy be mpampiasa indrindra". Ary anio dia hanao zavatra mitovy amin'izany amin'ny sehatry ny IT isika "Cloud Computing", izany hoe an'ny Cloud Computing.
Tadidio fa ny "Cloud Computing" na Cloud Computing amin'ny ankapobeny dia ilay fitantanana ireo loharanon-karena informatika virtoaly amin'ny alàlan'ny Internet. Izy io dia computing madio izay napetraka ho serivisy, ary natolotra tamina drafitra fitakiana sy fandoavambola, amin'ny alàlan'ny a Sehatra serivisy rahona.
Cloud Computing: Ny zava-drehetra ho serivisy - XaaS
Ho an'ireo liana amin'ny fikarohana ny sasany amin'ny anay Lahatsoratra mifandraika miaraka amin'ny sakany Cloud Computing, azonao atao ny manindry ireto rohy manaraka ireto, rehefa vita ny famakiana ity publication ity:
"XaaS no paradigma vaovao ho an'ny tsenan'ny informatika ankehitriny ary ny firoboroboany mandritra ny taona ho avy dia hisy fiatraikany lehibe amin'ny sehatra Telecommunications, Big Data and Internet of Things (IoT). Satria ny XaaS dia hevitra ara-teknolojia izay misy hevitra maro mifandraika amin'ny fanavaozana ny haitao eo amin'ny rahona, izay mamorona fomba vaovao hamoronana sy hanampiana lanja ho an'ireo fikambanana, na ho an'ny daholobe na ho an'ny tsy miankina.". XaaS: Cloud Computing - Ny zava-drehetra ho serivisy
XaaS: Cloud Computing - Ny zava-drehetra ho serivisy
Cloud Computing: fatiantoka - Ny lafiny hafa amin'ny farantsakely!
Fifandraisan'ny rehetra amin'ny alàlan'ny Cloud: Ahoana ny fomba hanatratrarana azy?
OpenStack sy Cloud Computing: Ny ho avin'ny computing cloud misy rindrambaiko maimaim-poana
Ethernity CLOUD: Tambajotram-pifandraisana Cloud Source Source
1 Cloud Computing: Ireo lozisialy sy rindrambaiko malalaka misokatra
1.2 Rindrambaiko Computing Cloud
1.3 Fampahalalana misimisy kokoa
Cloud Computing: Ireo lozisialy sy rindrambaiko malalaka misokatra
teo anivon 'ny Sehatra "Cloud Computing" o Cloud Computing, ary loharanom-baovao misokatra, azontsika atao ny manonona sy mamaritra ireto manaraka ireto:
Izy io dia Rafitra miasa ao anaty rahona izay mifehy vondrona maro an'ny computing, fitehirizana ary loharanom-pahalalana anaty foibe angon-drakitra iray manontolo, izy rehetra dia tantanana sy omena amin'ny alàlan'ny API miaraka amina rafitra fanamarinana iraisana. Izy io koa dia manana tontonana fanaraha-maso ahafahan'ny mpitantana mifehy sy manamora ny fanomezana loharano ho an'ny mpampiasa azy amin'ny alàlan'ny tranokala. Ho fanampin'ny fampiasa fotodrafitrasa mahazatra ho toy ny serivisy dia misy singa fanampiny izay manome orkestra, fitantanana lesoka ary fitantanana serivisy, ankoatry ny serivisy hafa, hiantohana ny fahazoana avo lenta ny rindranasan'ny mpampiasa. Inona no atao hoe OpenStack?
Izy io dia sehatra misokatra ho serivisy (PaaS) izay manome maodely tena mahomby sy maoderina amin'ny fandefasana rindran-rahona rahona eny ambonin'ny Kubernetes. Ho fanampin'izany, manolotra safidin'ny rahona, rafitry ny mpamorona ary serivisy fampiharana. Izany dia mahatonga azy io ho haingana sy ho mora kokoa aminao amin'ny fananganana, ny fitsapana, ny fanaparitahana ary ny fandanjana fampiharana. Inona ny Cloud Foundry?
Izy io dia sehatra fitoeran-kaontenera Kubernetes misy alàlan'ny fandidiana mandeha ho azy, ahafahanao mitantana ny cloud hybrid, multicloud, ary ny fametrahana computing edge. Ity vahaolana avy amin'ny orinasa Red Hat ity dia novolavolaina mba hanatsarana ny famokarana sy famokarana fanavaozana. Ary amin'ny asa mandeha ho azy farany, traikefa tsy miova amin'ny tontolo iainana, ary ny fanapariahana tena ho an'ny mpamorona, ny ekipa dia afaka miara-miasa amin'ny famindrana ny hevitra amin'ny fampandrosoana ho amin'ny famokarana mahomby kokoa. Inona ny atao hoe Red Hat OpenShift?
Izy io dia sehatra open source multi-cloud sy ny sisin'ny orkestra. Izay ankoatry ny zavatra hafa, ahafahan'ny fikambanana mivezivezy mora foana amin'ny rahona ampahibemaso sy ny marindrano rahona rahona amin'ny alàlan'ny famelana azy ireo hamily ny fotodrafitrasa misy azy miaraka amin'ny loharanon-karena voajanahary sy rahona rahona. Ho fanampin'izany, mamela ny mpampiasa hitantana domains automation sy orkestra samy hafa koa izy ao anatin'ny fantsona CI / CD mahazatra. Inona ny Cloudify?
hafa 13 misy ary efa fantatra Izy ireo dia:
Rindrambaiko Computing Cloud
teo anivon 'ny fampiharana mifandraika na azo ampiharina amin'ny Sehatra IT do "Cloud Computing" o Cloud Computing, ary loharanom-baovao misokatra, azontsika atao ny manonona ireto manaraka 10 ireto:
Tsarovy izany, ao amin'ny Lahatsoratra mifandraika voalaza etsy ambony, azo atao ny manadihady ny foto-kevitra sy teknolojia manaraka:
Ny zava-drehetra ho serivisy: XaaS, Izay rehetra atao amin'ny serivisy, na ny rehetra ho serivisy.
Rindrambaiko ho serivisy: SaaS, lozisialy ho serivisy.
Sehatra ho serivisy: PaaS, Sehatra ho serivisy.
Fotodrafitrasa ho serivisy: IaaS, Fotodrafitrasa ho serivisy.
Tombony, tombony, fatiantoka ary risika: Avy amin'ny Cloud Computing.
interoperability: Amin'ny alàlan'ny rahona.
Karazana rahona: Public, Private, Community ary Hybrid.
Sehatra itsinjaram-pahefana amin'ny ho avy: Fandrindrana rahona.
Faharanitan-tsaina: AI loharano malaza sy be mpampiasa indrindra AI
Raha fintinina, ny haben'ny "Cloud Computing" dia iray amin'ny maro fironana IT ankehitriny fa isan'andro dia mandroso amin'ny tanjaka izy ary mampanantena ny hahatanteraka zava-bita manan-danja maro ho an'ny fiarahamonina, indrindra amin'ny lafiny asa sy ny fomba fiainan'ny olona. ny Cloud Computing miaraka amin'ny teknolojia amin'ny fampandrosoana tanteraka toa ny 6G, la Faharanitan-tsaina artifisialy (AI), ny Internet amin'ny zavatra (IoT) ary maro hafa, mampanantena a ho avy lehibe IT ho an'ny zanak'olombelona.
Ary farany, manantena izahay fa ity boky ity dia tena ilaina amin'ny ankapobeny «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» ary mandray anjara betsaka amin'ny fanatsarana, fitomboana ary fanaparitahana ny tontolon'ny rafi-tontolo iainana misy «GNU/Linux». Ary aza atsahatra ny fizarana izany amin'ny hafa, amin'ny tranokala tianao, fantsona, vondrona na vondron'olona misy tambajotra sosialy na rafitry ny fandefasan-kafatra. Farany, tsidiho ny pejin-tranonay ao amin'ny «Avy amin'ny Linux» hizaha vaovao bebe kokoa, ary hiditra amin'ny fantsona ofisialinay Telegram avy amin'ny FromLinux.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » About us » Cloud Computing: Fampiharana sy sehatra misokatra ankehitriny
Ny serivisy Epic Games 'Easy Anti-Cheat dia mifanaraka amin'ny Linux sy Mac izao